Tube savaivony: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
CNC-maso: Alemaina PA HI8000
Azo ampiharina karazana fantsona: Round Tube, efamira Tube, mahitsizoro Tube, boribory lavalava Tube, D miendrika vy, T miendrika vy, H miendrika vy, fantsona vy, zoro vy, sns
Fitaovana azo ampiharina: Stainless vy, karbonina vy poakaty, ny tafo vy, varahina, aliminioma, varahina, firaka, sns
Modely No .: P2060
Maximum Loading lanja: 25kg / m
Tube savaivony: 20-200mm
P2060 / P3080 Tube tamin'ny laser fanapahana milina mamokatra faritra avo lenta isan-karazany ao amin'ny endriny sy ny habeny. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia fanapahana tamin'ny laser fibre, dingana maro azo mitambatra ho iray milina. Koa satria ny ankamaroan'ny faritra mitaky dingana maro, toy ny sawing nentim-paharazana, ary atsofony, machining, punching sy ny sokitra, P2060 / P3080 Tube tamin'ny laser fibre milina fanapahana dia afaka manatanteraka ireo dingana rehetra eo amin'ny milina iray.
Ny tamin'ny laser Tube fanapahana milina dia fitaovana amin'ny boky loader io no mampahafantatra ny fantsona ho an'ny mpandraharaha izay tsy maintsy dia apetraho ny fantsona ho any amin'ny milina sy ny tanana mafy ny Chuck. Fampiarahana ny dingana rehetra ireo ho iray milina mamonjy ny fotoana sy ny vola lany, rehefa lehibe fanodinana fantsona ao amin'ny batches ny milina javatra iray mbola mamela ny mpampiasa mba ho mora foana prototypes na kely batch famokarana.
Ity fantsona tamin'ny laser cutter ihany koa ny hafainganam-pandeha ambony mampiasa servos ho an'ny velona sy marina toerany izay mihena ny fotoana ho an'ny tsy-danja koa ny hetsika. Haingam-pandeha ireo servos miaraka amin'ny matanjaka dia afaka mampihena tamin'ny laser fibre anjara fanapahana andro sy hampitombo ny famokarana mamela ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola ambony ho an'ny mpampiasa ny farany.
Ity tamin'ny laser cutter Tube ihany koa ny fitaovana miaraka amin'ny feno fefy mba hiantohana ny mpandraharaha dia azo antoka kosa ny milina no miasa.
Golden Laser dia hanome asa fanompoana sy ny fanohanana feno ho an'ny tamin'ny laser milina , anisan'izany ny tahiry feno ny piesy sy ny singa mba hahazoana antoka ny mpanjifa handray fanoloana ny faritra haingana sy amin'ny fomba mahomby.
Tube tamin'ny laser fanapahana milina endri-javatra
Chuck sy Adjustable clamp fanohanana fanandratako fitaovana afa-mamahana ny fotoana, azo antoka concentricity, hisorohana swinging sodina.
Mandeha ho azy scanning fantsona.
Hatrany Find Center
Hampitombo ny famokarana, miantoka ny kalitaon'ny entana.
Mark faritra sy ny làlana fanapahana.
Fast zoro valiny, be fanatsarana nanapaka fahombiazana.
Avy hatrany hanitsy ny Speed
Ao amin'ny toe-javatra ny fifadian-kanina fanapahana, dia mety hahatratra fanapahana maharitra kalitao.
Vonjeo asa sy hisorohana ny workpiece tsy ho voarangotra.
mitarika ny Components
Manerana izao tontolo izao tamin'ny laser fibre nitarika ny haavon'ny sy ny elektronika singa mba ho azo antoka milina fahamarinan-toerana ambony kokoa.
Advanced Chuck rafitra clamping
Chuck afovoany-tena fanitsiana, manitsy avy hatrany ny clamping hery araka ny profil fepetra arahana mba hahazoana antoka fa ny manify tsy fantsona simba.
Dual antony chucks dia mifanaraka amin'ny fantsona isan-karazany tsy mila ny hanoloana na hanitsiana valanoranonao.
Long clamp tapaka lalan-dra. Rehefa ny sodina savaivony dia miainga ao anatin'ny 100mm, dia tsy ilaina ny manitsy ny clamp.
Multi-mpiray (mamahana mpiray, Chuck fihodinan'ny mpiray sy ny fanapahana tamin'ny laser lohany) linkage nandritra ny hetsika ny fanapahana lohany.
Automatic fanangonana fitaovana
Ny fanohanana mitsingevana manangona fitaovana ny fantsona vita ho azy.
Ny fanohanana mitsingevana dia fehezin'ny servo maotera ary afaka manitsy ny fanohanana hevitra araka ny sodina haingana savaivony.
Ny rafitra fanohanana mitsingevana dia afaka ho tonga lehibe sodina mafy savaivony.
Automatic mitsingevana Support
Araka ny fanovana ny toe-tsaina sodina, ny fanohanana avy hatrany hahavony azo ahitsy amin'ny fotoana tena mba hahazoana antoka fa ny ambany ny sodina foana azo sarahina amin'ny an-tampon'ny fanohanana lavaka, izay mitana ny anjara asan'ny dynamically manohana ny mpitsoka sodina rehetra.
Welding seam famantarana
Ny toerana seam welding-tsodina mety ho fantatra mba ho azo antoka fa ny fanapahana ny toerana fialana welding seam nandritra ny fanodinana ary tsy ny olana ny vary main'ny rivotra lavaka amin'ny welding seam.
Fa ny voahenjana sodina sy ny sampona, ny asa fanitsiana mandeha ho azy dia afaka mahatsapa ny segmented sisin'ny fikarohana, ary hanitsy ny fahadisoan-dàlana avy hatrany mba hahita ny afovoan fotoana ny curved tsodina noho ny fanapahanao mba hahazoana antoka ny fanapahana marina tsara.
Rehefa nanapaka ny tapany farany ny fantsona, ny anoloana no ho azy Chuck valanoranony misokatra ary ny aoriana valanoranony Chuck hamaky ny Chuck aloha mba hampihenana ny taom-piotazam jamba faritra.
Tube savaivony latsaky ny 100 mm sy ny fitaovana wastage 50-80 mm ny
Tube savaivony mihoatra ny 100 mm sy ny fitaovana wastage 180-200 mm ny
Tsy voatery - ny fahatelo manadio mpiray rindrina anaty fitaovana
Noho ny fanapahana tamin'ny laser dingana, ny tain-drendrika, dia tsy maintsy manaraka ny ampahany amin'ny rindrina anatiny ny mifanohitra mpitsoka sodina rehetra. Indrindra indrindra, ny sasany amin'ny fantsona kely diameters tain-drendrika dia hanana bebe kokoa. Ho an'ny sasany sarotra kokoa fangatahana, ny fahatelo mandray zana-tsipìka voalambolambo fitaovana afaka hanampy ho hisorohana ny tain-drendrika avy amin'ny manaraka ny rindrina anatiny.
Tube tamin'ny laser fanapahana milina rindrambaiko
Zavatra PA fanaraha-maso ny rindrambaiko
Mameno pejy iray asa bebe kokoa rehetra mpampiasa-namana!
Haingana ampanjifaina ny interface tsara, mety kokoa!
Add mahaleotena aretina interface tsara ho haingana troubleshoot-toerana amin'ny zava-manahirana, marani-tsaina kokoa!
Lantek Flex3d manohana isan-karazany karazana sodina
Standard Tube karazana: Round Tube, efamira Tube, Ob-karazana fantsona, D-karazana fantsona, fantsona telozoro, boribory lavalava Tube, sns
Ary manokana miendrika mitovy ny sodina ny savaivony.
Mandritra izany fotoana izany, dia manana Functional flex3d Modules for profil fanapahana , izay afaka manapaka zoro vy, fantsona vy sy H miendrika vy, sns
Azo ampiharina fanapahana tamin'ny laser karazana fantsona
Standard karazana (Closed karazana)
Round Tube, efamira Tube, mahitsizoro Tube, boribory lavalava Tube, boribory lavalava Tube, D-karazana fantsona, fantsona Triangle ...
Modular karazana (Non-mihidy karazana)
Fantsona vy, U-vy, zoro vy, T-karazana, H-karazana, lath vy ...
Laser fanapahana fantsona santionany
Laser fibre Sodina / Tube manapaka Machine Technical fikirana
Model TSIA .: P2060 / P3080
sodina halavan'ny 6000mm / 8000mm
sodina savaivony 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
Laser loharano IPG / nLIGHT tamin'ny laser fibre
Laser Hery 700W ~ 6000W
Avereno toerany araka ny marina ± 0.03mm
Maximum toerany haingana 90m / min
Automatic fehin'aina Loader Tube Laser Cutting Machine
Heavy Adidy Sodina Laser Cutting Machine
Full Closed Fibre Laser Cutting Machine amin'ny Pallet Exchange Table
Open Type Fibre Laser Cutting Machine
Dual Andraikitra Fibre Laser Metal Sheet & Tube Cutting Machine
High fametrahana mazava Linear Motor Fibre Laser Cutting Machine
Tube Laser Cutting Machine Application Indostria
Fanaka, fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana Fitness, fitrandrahana solika, fampisehoana talantalana, toeram-piompiana milina, tetezana, fandefasana, rafitra faritra, sns
Tube Laser fanapahana Machine Application Material
Round, efamira, mahitsizoro, boribory lavalava, andilany manodidina Tube sy ny fantsona vy.
<< RAHA MILA FANAZAVANA FANAMPINY Tube Laser Cutting santionany
Fanapahana tamin'ny laser fibre hatevin'ny vy isan-karazany tamin'ny laser fahefana
Aza dia fanapahana
malemy fanahy Steel
Mba andefaso olona Golden Laser bebe kokoa momba ny famaritana sy ny teny nindramina fibre tamin'ny laser fanapahana milina . Ny valim-ireto fanontaniana manaraka ireto dia hanampy antsika ny fahazoan-dalana tsara indrindra milina.
1. Inona no karazana vy no tokony hanapaka? Metal taratasy na fantsona? Carbon Stainless vy na vy, na aluminium, na vy, na varahina nandrisika na varahina ...?
2. Raha toa nanapaka taratasy metaly, inona ny hatevin'ny? Inona no miasa haben'ny no ilainao? Raha nanapaka metaly fantsona na sodina, inona ny hatevin'ny rindrina, savaivony sy lavany-tsodina / fantsona?
3. Inona no vokatra vita? Inona no fampiharana ny orinasa?
4. ny anaranao, orinasa anarana, mailaka, antso an-tariby (WhatsApp) sy ny vohikala?
Modely No.: GF-2040T / GF-2060T
Large Format Fibre Laser manapaka Machine ho Metal Sheet sy ny Tube
Large endrika misokatra-karazana milina fanapahana tamin'ny laser fibre amin'ny fanapahana Tube miraiki-po. Sheet faritra fanapahana 2m × 4m, 2m × 6m. Tube 4m lava, 6m. Tube savaivony 20mm ~ 200mm Laser hery 1000W ~ 3000W
Modely No.: GF-1530 / GF-1560
1200W CNC Fibre Laser manapaka Machine for Metal Sheet
Fanapahana taratasy ambony indrindra hatevin'ny vy 14mm karbaona vy, 6mm Stainless vy, 4mm aliminioma, 4mm tafo vy, varahina 4mm, 3mm varahina
Modely No.: GF-1530JH
Full Closed Fibre Laser nanapaka Machine amin'ny Pallet changer